Ciise Qof Dhegannugul Buu Ahaa | Carruurtaada Wax Bar
Ciise Qof Dhegannugul Buu Ahaa
Mararka qaarkood miyay adagtahay inaad waalidkaaga dhegeysatid?— Haa mararka qaarkood way adagtahay. Maad ogtahay inuu Ciise dhegeysan jiray Yehowah iyo waalidkiisaba?— Ciise siduu ahaa waxay kugu caawin kartaa inaad dhegeysatid hooyadaa iyo aabbahaa xitaa markay adagtahay. Bal aan wax ka sii baranno.
Intuunan Ciise dunida iman Yehowah buu samada la jiray. Yehowah baa Ciise abuuray sidaas awgeed baa loo yiri waa Aabbihiis. Haddaba Ciise dunidan waalid buu ku lahaa. Waxayna ahaayeen Yuusuf iyo Maryan. Ma taqaannaa siday u noqdeen hooyadiis iyo aabbihiis?—
Yehowah wax cajaaʼib ah buu sameeyay. Wuxuu sababay inuu Ciise Maryan ku dhex koro sida ay ilmaha kale hooyadooda ugu dhex koraan. In leʼeg sagaal bilood kaddib Ciise duniduu ku dhashay. Maryan iyo ninkeeda Yuusuf sidaas bay ku noqdeen waalidkii Ciise oo dunidan.
Markuu Ciise 12 sano jiray wuxuu muujiyay jacaylkuu Aabbihiis Yehowah u qabay. Waxan waxay dhaceen markay reerkiisii aadeen Yeruusaalem siday u soo iidaan Iiddii Kormaridda. Yuusuf iyo Maryan markay gurigoodii fogaa u soo socdeen Ciise meel walbay ka waayeen. Halkee baad u maleysaa inuu joogay?—
Muxuu Ciise ka doonay macbudka?
Yuusuf iyo Maryan si degdeg ah bay Yeruusaalem ugu soo noqdeen oo markaana Ciise meel walba bay ka raadiyeen. Markay heli waayeen aad bay uga welweleen. Haddaba saddex maalmood kaddib waxay ka dhex heleen macbudka oo ahaa meeshii ay dadku Yehowah ku caabudi jireen. Maxaad u maleysaa inuu Ciise ka doonay macbudka?— Wuxuu u aaday siduu Aabbihiis Yehowah wax uga sii barto. Ciise Yehowah wuu jeclaa oo wuxuu doonayay inuu barto siduu uga farxiyo. Mar walba Yehowah wuu dhegeysan jiray xitaa markuu nin weyn oo qaangaar ah noqday. Ciise Yehowah ma joojin inuu dhegeysto xitaa markay ku adkayd oo uu rafaaday. Ciise muu dhegeysan jiray waalidkiisa?— Kitaabka wuxuu inoo sheegaa inuu dhegeysan jiray.
Ciise siduu u dhaqmay maxaad ka baran karta?— Haddii xitaa ay adagtahay waa inaad hooyadaa iyo aabbahaa dhegeysatid. Saas ma yeeli doonta?—
Luukos 1:30-35; 2:45-52
Sidee bay dunidan Yuusuf iyo Maryan ugu noqdeen waalidkii Ciise?
Ciise hooyadiis iyo aabbihiis halkee bay ka heleen markay waayeen?
Siduu Ciise u dhaqmay maxaad ka baran karta?
Wadaag Wadaag Ciise Qof Dhegannugul Buu Ahaa